सरी मिलन भयो देशकै चर्चित २ सामाजिक अभियन्ता रबि लामिछाने र धुर्मुसको !! के अब बन्ला त गौतम बुद्ध अन्र्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला हाम्रो देशमा ? (बिशेस लाइव भिडियो) - Enepalese.com
सरी मिलन भयो देशकै चर्चित २ सामाजिक अभियन्ता रबि लामिछाने र धुर्मुसको !! के अब बन्ला त गौतम बुद्ध अन्र्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला हाम्रो देशमा ? (बिशेस लाइव भिडियो)
इनेप्लिज २०७४ चैत २४ गते १३:२४ मा प्रकाशित
यस बिशेष अभियान टोलीमा धुर्मस मात्र छैनन् पत्रकार रबि लामिछाने पनि जोडिन आइ पुगेका छन् । पोखराको रंगशाला र भरतपोखरी लगायतका ठाउँहरुमा टोलीले जग्गा हेरीसकेको छ । अब सबै ठाउँको जग्गालाई मध्यनजर गरी र क्रिकेटको मापदण्ड, यातायात, बिमास्थल लगायतको कुराहरुलाई लिएर छिटै स्थान छनौट गर्ने धुर्मुसले बताएका छन् । आजको बिशेष लाइव भिडियो मार्फत सिताराम कट्टेल र रबि लामिछाने यस अभियान सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दिदै यसो भने हेरौ यो भिडियो |